Goldenrod: ọgwụ ọgwụ na contraindications - Mkpụrụ ubi - 2020
Goldenrod: uru na ngwa
Goldenrod nwere ọtụtụ aha: mkpanaka ọlaedo, nku ọlaedo, ahịhịa ndụ na ndị ọzọ. Ogwu a bu ihe ndi ozo na mba ndi Soviet, Central Central Asia na otutu mba Europe.
Njirimara bara uru nke goldrod maka umu mmadu
Esi tinye ọlaedorod n'ọrụ
Jiri mmanụ aṅụ nke goldrod
Medicinal properties of goldenrod infusion
Nkwadebe nke tincture nke goldenrod
Nkwekọrịta maka iji goldrod mee ihe
Goldenrod: ihe mejupụtara nke ọgwụ osisi
A ka na-aghọta ihe mejupụtara chemical nke goldrod. Ihe ndị ahụ dị n'ime osisi goldenrod, n'ezie, na-enye ya ọgwụgwọ Njirimara. A chọpụtara na alkaloids, flavonoids (rutin, quercetin, wdg), glycosides, saponins, na terpenoids nọ na ya mejupụtara. Achọpụtakwara ihe ndị na-agwọ tanning na ilu, coumarins, mmanụ dị mkpa. Na mejupụtara, phenolcarboxylic acid derivatives - kọfị, chlorogenic, hydroxycinnamic - achọpụtala.
N'ihi ọgwụ ọgwụ ya, a na-eji ọlaedorod eme ihe dị ka diuretic (urolithiasis, akụrụ na eriri afo), mgbochi mkpali na antibacterial. Goldenrod nwere ike ịchịkwa mgbanwe salts ma belata nnu salts n'ime ahụ. Ihe flavonoids nke dị na osisi ahụ, na-akwado ihe eji eme ihe.
Nkwadebe nke dabeere na goldrod na-egosi uru bara uru na ọgwụgwọ urate na nkume oxalate. O doro anya na ụmụ mmadụ nwere osisi maka prostatitis na ọrịa urethritis. Dịka akụkụ nke ụfọdụ ọgwụ osisi na-eme ka ọnọdụ nke prostate adenoma na adịghị ike dị mma. Na nkà mmụta ọgwụ, osisi na-enyere aka belata ọnọdụ nke cystitis, candidiasis.
Ọ dị mkpa! Ị nwere ike iji ahịhịa "mkpanaka ọlaedo" n'ịgwọ nkume na-enweghị ndụmọdụ nke dọkịta, ma e wezụga maka uru ị nwere ike ịkpata na - emerụ ọgwụ - nke dabeere na goldenrod na nkume phosphate, n'ihi na ọ na-eme ka pH nke urine pụta.
Njirimara ọgwụ ọjọọ nke osisi na-aba uru maka ikpochapụ anụ ahụ, maka fractures na edemas, Njirimara nke ogwu na-enyere aka gwọọ ma hichaa ọnyá. Na Germany, a na-eji ọlaedorod eme ihe dịka onye na-eme ka ike gwụ na mmiri.
Ọgwụ mmụta ọdịnala na-achọta ngwa ngwa edozi maka ọrịa afo, ọrịa gallstone, na-adịghị mma metabolism nke uric acid. Ọ na-eme ka ọnọdụ nke ndị ọrịa na-arịa ọrịa na-egbu egbu na pyelonephritis dị ukwuu. Ogwurugwu goldenrod na-enyere aka ịkwụsị mgbaàmà na-egbu mgbu nke rheumatism na gout. A na-eji ahịhịa ọhụrụ eme ihe na ọnya na akpụ na akpụkpọ ahụ, na-ebelata ọzịza. Ndị nna nna anyị mere ahịhịa na jaundice, scrofula na ụkwara nta. Mgbe ị na-agbazi akpịrị, ị nwere ike ịgụtaghachi site na stomatitis, akpịrị na gingivitis, belata nsị na ọbara ọgbụgba nke goms, nakwa wepụ ísì ọjọọ ahụ n'ọnụ.
Ị ma? Goldenrod bụ osisi na-eme ihe ike, na-ebi n'akụkụ ọ bụla, ọ na-eme ka omenala ndị ọzọ dị ike. Na mgbakwunye, ọ na-agbasa ngwa ngwa site n'ịgha mkpụrụ n'onwe ya, na-ebi n'ókèala ndị ọzọ ma na-agbanwe ụwa ọkụ. Ya mere, o doro anya na ndị na-amụ banyere Ụlọ Ọrụ Biodiversity na-eti mkpu.
Ogwu nke goldenrod, ya decoction mgbe eji maka ọgwụgwọ nke nephritis, urate na oxalate salts ke akụrụ nwere ụfọdụ contraindications: ọ na-adịghị atụ aro ka na-aṅụ decoction maka ume ike kpatara obi na akụrụ odida. Iji dozie efere, wunye mmiri esi mmiri (200 ml) na otu tablespoon nke okpukpu kporo, jidere nkeji iri na mmiri bat. Mgbe ahụ hapụ maka awa atọ iji nye gị ma dị jụụ. Mgbe nnu na akụrụ, jade na nkume ọrịa na-aṅụ 50 ml otu ugboro n'ụbọchị. Maka ojiji mpụga, a na-eme ka decoction ahụ dịkwuo. A na-eji ya agwọ ọrịa anụ, psoriasis, ụkwara nta na eczema.
Iji mee tii, 5 g nke herbs, wunye 200 ml mmiri, wetara a obụpde ma wepu si okpomọkụ. Kpuchie maka nkeji 2. Ụdị tii a nwere ike ịṅụbiga mmanya atọ ruo otu ụbọchị, mana ọlaedorod nwere, ma e wezụga ịgba akaebe, nkwenye. Otu tii a na-ahụ ike dị n 'ọnụ ọgụgụ dị otú a adịghị emerụ ahụ. Ọ bụrụ na e nwere usoro mmebi ahụ ma ọ bụ nsogbu ndị nwere obi obi, ị ga-ekpocha tii.
Tea sitere na ahihia nke goldenrod, ekele maka usoro ihe omume nke osisi ahu, na-abuta ihe bara uru nke antioxidants. Ihe ọṅụṅụ ahụ na-enye aka iwusi capillaries ahụ, na-asacha ahụ nke free radicals, na-ebelata ọkwa nke acidity. Tea na-atọ ụtọ na-atọ ụtọ ma nwee ọkụ ọkụ nke mmanụ dị mkpa.
Goldenrod hụrụ aṅụ. Mmanụ aṅụ nke osisi nwere akwa antibacterial àgwà. Ojiji nke ngwaahịa a bara uru iji mee ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ dị ike, mmetụta dị irè na usoro usoro metabolic ahụ. N'ọdị anya, n'ụdị mpi, a na-eji mmanụ aṅụ agwọ ọrịa, edema. N'ụlọ, ọ bụ ezigbo ihe ngwọta maka akpịrị akpịrị, sinusitis, rhinitis na-adịghị ala ala, rhinitis na maningitis. Goldenrod na uru ya bara uru na-agwọ ọrịa akụkụ nke eriri afọ, ma a na-eme ka mmanụ aṅụ na-eme mkpesa na ọnụnọ nke nnukwu mkpesa na afo na eriri afọ. E kwesịrị iji nlezianya mee ihe ndị na-arịa ọrịa ara ehi.
Mmasị Magazin Polish a ma ama bụ "Beekeeping" na isiokwu nke okpomọkụ nke 2016 bipụtara ihe ndị na-adọrọ mmasị: mmepụta shuga na hectare nke goldrod bụ kilogram 251, pollen - 48 n'arọ.
A na-eji nsị oyi na-esi na ahịhịa nke goldenrod mee ihe maka ịgwọ tractụrin, akụrụ, prostatitis, adenoma, rheumatism na gout. Iji kwadebe buru okpukpu abụọ nke inflorescences, wunye 200 ml nke mmiri sie mmiri na ime ụlọ okpomọkụ na-ahapụ ka ime biya maka awa anọ. Na dose nke infusion kpebisiri ike n'otu n'otu. Enwere ike iwepu goldrod ahụ ihe karịrị otu ọnwa, mgbe ahụ, na-enweghị izu izu abụọ, ikuku ka a na-agbagha. A pụrụ iji ọgwụ a na-agwọ ọrịa tractitis, akụrụ, gout, prostatitis, adenoma, rheumatism. A na - eji ọgwụ na - ekpo ọkụ na - agwọ ọrịa ọrịa na ọrịa nrịanrịa. Otu tablespoon nke herbs wunye esi mmiri (250 ml), hapụ maka awa abụọ. N'ebe dị anya, a pụrụ iji infusion ahụ mee ihe maka compresses na lotions sitere na ọrịa anụ ahụ nakwa maka ọkpụkpụ ọkpụkpụ kachasị mma na fractures.
A na-eji ọgwụ ndị na-egbu egbu mee ihe n'ụzọ dị irè n'ịgwọ akụrụ, nsogbu urinary na gallbladder. Tincture na-enye aka na ọrịa ọbara, erughị vitamin. Ị nwere ike belata ọnọdụ ahụ na afọ ọsịsa. Jiri nlezianya dị mma na ọrịa ogbu na nkwonkwo, na nsogbu akpụkpọ ahụ. Maka tincture were 80 g nke ahịhịa kpọrọ nkụ, wunye vodka - 500 ml, hapụrụ n'ime ụlọ gbara ọchịchịrị na okpukpu atọ maka izu atọ. Nara, diluted with water, 15 mg. Usoro ọgwụgwọ maka otu ọnwa. Maka ọrịa a na-etinye na mgbochi na imeju ume, a na-agbanye mmanụ aṅụ na tincture: a teaspoon mmanụ aṅụ, 5 mg tincture kwa 120 ml nke ọkụ sie mmiri.
Ntị! A ghaghị icheta na odorod na mmanụ aṅụ, na - abụghị ọgwụ ọgwụ ya, nwere mkpesa - nnukwu ihe ọkụkụ na eriri afọ, karịsịa ebe ọ bụ na mmanya na - aba n'anya na - emetụta ya.
Mkpanaka ọlaedo na ndokwa nke osisi, n'agbanyeghị na ọgwụ agwọ ọrịa, nwere ụfọdụ contraindications. A na-eme ka odorodrod bụrụ ihe megidere na ndị inyom dị ime na ndị nọọsụ. Enweghị ike iji maka ndị nwere glomerulonephritis. E kwesịrị iji ọgwụ ndị sitere na goldrod, nakwa mmanụ aṅụ maka ndị ọrịa mamịrị, ọgwụ ndị ọgwụ insulin na-adabere. Ejila ugwo nke ndi mmadu nwere ihe ogwu na-emeghi ihe o bula.
N'ihe gbasara ọrịa ọrịa akụrụ, ị ghaghị iwepụ nsogbu ahụ, ma tinyezie osisi herbal, ma ọ bụghị ihe ngwọta ahụ ga-emerụ ahụ ahụ. A naghị atụ aro ya iji ọgwụ ọjọọ na-aṅụ ọgwụ. Ọgwụgwọ ọgwụ agwọ ọrịa mgbe ụfọdụ na-eweta ihe ndị ọzọ karịa ọgwụ. Nanị ihe ị ga-ama bụ na ọgwụ ọ bụla, usoro ọgwụgwọ ya na mmetụta ya bụ mgbe ọ bụla dị iche maka onye ọ bụla; ihe na-enyere mmadụ aka imerụ ọzọ. Ndụmọdụ nke dọkịta na-abịa agaghị adịghachi.